Dawlada iyo Nidaamka Islaamka
MAS'UULIYADA CULIMADA & MUSTAQBALKA UMADA
Waa Maxay Dawlad?
Dawlad Caddaalad iyo Kala Dambeyn leh, Dastuur leh, oo Garsoore caadila leh, Umada u simantahay, Qof walibana xuquuqdiisa helo, Badbaaddada shaqsiga iyo umadaba ahay, cidii Caalamka ka hirgaliyay markii u horeysay wuxuu ahaa Rasuulkeenii Sharafta Lahaa ee Suubanaa Muxammad Sanadkii Kowaad ee Hijrada, wuxuuna ka dhisay Madiina. Umadu waxay ahayd dad jaahiliin ah oo qabiilooyin is xooga oo is dulmiya ah. Meelaha qaarna waxaa ka jiray boqoro jaahiliin ah, oo waxay doonaan uun sameeya dadkana adoon sada.
Nidaamka Islaamka oo nasiib-darro ah mid dadku jaahil ka yihiin, wuxuu State-ka ama wixii u dhigma u arkaa inuu yahay midkii ka shaqaynlahaa sidii Dadku Naarta uga badbaadi lahaayeen Jannadana u gali lahaayeen. Fahamka State-ka ee Islaamku waa in dawladdu Farto wanaagga xumaantana reebto, dadkana u sahasho, oo u Fududayso oo uga shaqayso sidii ay Jannada u geli lahaayeen iyada oo u salaxaysa wax kasta oo loogu dhawaanayo Jannada kana leexinaysa ama ka awdaysa wax kasta oo Naarta gaynaaya. Yacnii Ujeedada kama dambaysta ahi waa taas. Dawladdu ama State-ku waxa uu ilaalinayaa shanta qasdi (ujdeeddo, objectives, ends) ee diintaba Illaahay usoo dejiyey sida ay culimadii Islaamka ee hore cadeeyeen (maqaasit shariica). Kuwaas oo ah, in dawladda Islaamka ahi damaanad qaaddo ilaalinta Nafta, Maalka, Cirdiga, Diinta iyo Taranka (tacmiirka adduunka).
Khaliif waxaa weeye kalmad carabi ah oo micnaheedu yahay Hogaamiyaha umada Muslimiinta sida:Abuubakar, Cumar Binu Khadaab , Cusmaan binu Caffaan iyo Cali ibnu Daalib dhamaan tood Ilaahay ha ka raali noqdee. Takale waa bini aadamka, Allaah SWT wuxuu Qur’aankiisa ku yidhi (Al-Baqra:30) waxaan abuuri Khaliif dhulka iiga wakiil noqda. Khallifkaas uu Alle inoo sheegay waxaa weeye dadka oo Nabi Aadam (C.S) ka soo fircamay. Laakiin hada waxaynu kalmada u isticmaalaynaa Hogaamiyaha Dalka Muslimiinta.
Waa Maxay Waajibaadka Khaliifku (Hogaamiyaha Dalka Muslimka?)
1. Hogaamiyahu (Khaliifku) waa inuu Muslim yahay.
2. Waa inuu Nin yahay oo aanu haweenay ahayn, sida ku cad xadiiskii Nebiga (S.C.W.) yidhi: Umad Muslim ahi haweenay kama dhigan karto Hogaamiye (Leader).
3. Waa inuu leeyahay Cilmiga diinta Islaamka oo uu yahay mid go’aan gaadhi kara kalidii hadii ay lama maarmaan noqoto.
4. Waa inuu yahay qof caadil ah, Akhlaaqad wanaagsan oo Xumaha iyo Samaha kala saari kara, Qof la aamini karo laguna kalsoonaan karo.
5. Waa inuu yahay Qof caafimaadkiisu dhanyahay, Geesi ah, Caawimaad badan oo Umada ka difaaci kara cadow kasta oo soo weerara, Indhahiisa, Dhagahiisa, Carabkiisa iyo dhamaan xubnaha jidhkiisa oo dhami waa inay u fayoowyihiin oo sifiican u shaqaynayaan. (micnaha maaha in qofka lagu nacaayo xanuun ama dhaawac xaga Rabbi uga yimid laakiin waxaa la eegayaa Xilka Umada loo qabanayo waa mid intaas ka culuis xag aakhiro iyo aduunba).
6. Waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay Siyaasada aduunka, Milatariga iyo Maamulka.
Hogaamiyuhu haduu yahay mid Guud oo Islaamka oo dhan, Culimida qaarbaa leh Qofka Khaliif loo dooranayaa waa inuu ku abtirsado qabiilka Qureysh maxaa yeelay waa qabiilkii muslimiinta hogaamin jiray, Hogaamiyayaashii Muslimiinta oo dhamina waxay ahaayeen quresh, Nebiguna SCW wuxuu yidhi: “Hogaamiyayaasha Muslimku waa quresh.” Sikastaba ha noqotee; Culimoda Islaamka qaar badan oo ka midi way ka faalo bixiyaan shardigan. Al-Mawaardi wuxuu qoray: Khaliifku waa inuu ahaadaa qureesh isagoo soo qaadanayaa odhaahdii Abubakar yidhi: Hogaamiyaha Muslimiintu waa qureesh, wasiiradiisuna waa dadka kale ee aan qureeshta ahayn, Culimada diinta Islaamka aqoonta dheer u leh intooda badani figradan bay qabaan. Abu Bakr Al-Baqlaani wuxuu yidhi: Hogaamiyaha Muslimiintu waa inuu ka yimaado Umada inteeda badan iyadoon la eegin qabiil. Muxammad Riyaa-Ad-Diin iyo Abu Xanifa waxay qoreen: Hogaamiyaha Muslimiintu waa inuu ka yimaado aqlabiyada badan micnaha dalalka muslimka intooda ugu badan ee isku dhinac aaminsan si ay u fududaato in amarkiisa la raaco oo lagu kalsoonaado. Lakiin hadii hogaamiyahu yahay mid dal qudha sida Somaliland/Somaliya shardigan 7aad ee qabiilku wuu kabaxayaa meesha shardiyada kale ayuunbaa la dhamaystirayaa
Kitaab & Hub Illaalinaaya